Qeerroon Faaruu Warraaqsaan Tumsame
Date: March 4, 2012Author: Oromedia 0 Comments
(Oromedia, 4 Bitootessa 2012) Warraaqsa bilisummaa Oromoo sochiin diddaa Qeerroodhaan finiinfamaa jiru deeggaruun artisitiin Oromoo beekamaa fi jaalatamaa tokko sirba baaqqee qabsoo fi diddaa Oromoo leellisu Qeerroof gumaate.
Wallisaan Oromoo beekamaa fi jaalatamaa, Hirphaa Gaanfuree, wallee warraaqsaa baaqqee kan sochii Qeerroo leellisuu fi qabsoo Oromoo jajjabeessu qopheessee jajjabina Qeerroof akka ooluuf kan gumaache ta’uu oduun marsaa Qeerroo irraa arganne ni mul’isa.
Akka oduu marsaa Qeerroo irraa argame kanaatti, Wallisaa Hirphaan walluu haarawaa kana keessatti jabinaa fi murannoo qabsoof qabu kan mirkaneesse caalayyuu, ilmaan Oromoo sababa roorroo fi qabsootiin addaan faffaca’an otuu abdii hin kutatiin jabaatanii qabsaa’uun gara injifannootti ce’uu akka danda’an dhaamee jira.
Qabsoon obsaa fi kutannoo kan barbaadu ta’uu kan hubachiise Wallisaa Hirphaa Gaanfuree, “qabsoon Obsa gaafataa, hin ariifatiin,” jechuun gorsa guddaa dhaloota qabsoo finiinsaa jiraniif dabarsee jira.
Artistooti Oromoo jalqaba irraa kaasanii diddaa Qeerroo kan jajjabeesuu fi humneessuu keessatti gumaata guddaa gumaachaa akka jiranis gabaasti Qeerroo irraa bahu kun ni mul’isa.
Wallistooti Oromoo kan akka Afandii Siyyoo fi Elemoo Aliis sochii Qeerroof faaruu fi sirboota warraaqsaa qopheessanii gumaachuun isaanii kan yaadtamuu dha.
Previous Previous post: Yaaliin ABO Itoophessuuf Godhame, Kutannoo Sabboontotaan Fashale!
Next Next post: Wellistooti Oromoo Welluu Haaraan Dhiyaatan!